काठमाडौँका व्यापारिले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कति ?
Home/Banner News/काठमाडौँका व्यापारिले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कति ?
१० असार काठमाडौँ । काठमाडौँमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नेले स्थानीय सरकारलाई कति कर तिर्नुपर्ला ? काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा यस्तो दर तोकेको छ ।
होम क्वारेन्टिनमा एक पुरुषको मृत्यु, स्वाब परीक्षणका लागि पठाइयो
हवाईजहाजको भाडामा भारी छूट, यस्तो छ नयाँ भाडादर
भारत र चीनका सैनिकबीच भिडन्त , तीन भारतीय सैनिकको मृत्यु
हरिवन नगरपालिकालाई नेपाली कांग्रेस नगर समितिको यस्तो सुझाव (विज्ञप्ती सहित)